Address: 8ကြိမ်မြောက်ကြမ်းပြင်，T10 အဆောက်အ，မြို့，1-St Jihua လမ်း，Chancheng ခရိုင်，Foshan စီးတီး，Foshan စီးတီး，ဂွမ်ဒေါင်း，တရုတ်နိုင်ငံ
ရေချိုးခန်းဗီရိုသည်ရေချိုးခန်းပရိဘောဂတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်. A good-looking and practical bathroom cabinet can not only help people better storage of goods, but also can playadecorative effect. လက်ရှိအချိန်မှာ, there are many kinds of bathroom cabinets in the market, with various styles and materials. So…
ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်ပစ္စည်းများအတွက်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူကနေရေချိုးခန်းအနတ္တကိုစိတ်ကြိုက် , သင့်ရဲ့ရေချိုးခန်းကိုလန်းစေပါ!!! As we all know, Bathroom mirror cabinet is an important furniture in the whole bathroom. A good bathroom mirror vanity will make the whole bathroom look more fashionable and beautiful. Add an extra instant glam to…
လက်ရှိအချိန်မှာ, အိမ်များရှိအိမ်သာအများစုသည်ခြောက်သွေ့။ စိုစွတ်မှုရှိခြင်းနှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်, but how to improve the value of the toilet has becomeaworry for many homeowners. I think that the combination of bathroom cabinets, washbasins, and bathroom mirrors in the bathroom isagood…
MANTANA Vanity Unit is available in widths of 800 မီလီမီတာ, 1000 မီလီမီတာ, 1200 mm and 1,500 မီလီမီတာ. It comes withalarge, fully retractable, soft closing drawer and doors withawashable anti-slip mat, andahidden internal drawer witharemovable storage compartment. The ceramic washbasin has no overflow.…
မည်သည့်ရေချိုးခန်းတွင်မဆိုသစ်သားအလုပ်ရုံများသည်အလွန့်အလွန်ကြည့်ကောင်းသည်ဟုငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ, ဒါပေမယ့်အများဆုံးသဘာဝထုတ်ကုန်နှင့်ဝသကဲ့သို့, there needs to be an element of upkeep to ensure that the worktop looks as good as the day it was installed. At FRANK, rather than offering solid timber worktops, we have four…